Nguwuphi add-ons angathanda ukuba ukuvuselelwa?
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #614 by rikoooo
Ndiza abathumela lo myalezo ukuba yeyiphi add-ons ufuna kakhulu ufuna ukuba ihlaziywe, njengoko mna ngoku ukuba uhlaziye ezimbalwa, ubuya kunceda kakhulu ukufumana ukuba yeyiphi ofuna kakhulu.
Waye endleleni, ukuba usenakho undinike ikhonkco kuguqulelo ehlaziyiweyo (ukusuka kwenye website) kuza kuba kumnandi.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: Gh0stRider203, Jodsalz1, Bubble @ Sheep
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #615 by Dariussssss
Kulungile kuqala kwiinto zonke, ezinye iimpazamo ...
I-A320 mega Pack, iqhubeka ingqubeka. Ayizinzanga kakhulu kum FSX, Andazi kutheni.
Thomas Ruth A330 / 340, PFD aliveli zombini esitalini aze overspeed ... kwaphela.
Iinqanawa zomkhosi zase-Emirates, ezimbi kakhulu iFPS, zenzakalise eyam FSX...
updates kunokwenzeka ...
Kaloku, bekuya kuba umdla ukuzimanyanisa thile A330 / 340 ngu TR, kunye A320 Mega Pack, ngakumbi ncakasa ukudibanisa-moya leyo elibalaseleyo.
A380, yinto enye, PFD aliveli zombini esitalini aze overspeed.
Ukuba ndikhumbula enye into, ndiya kulibeka kuyo apha.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #616 by Gh0stRider203
Dariussssss, loo nto yonke ukulungisa lula KAKHULU !!!
1) Kupha moya yakho Airbus;
2) Susa KONKE Airbus
3) Buyisela nge kwendiza
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: i-denpic
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #617 by D115
Ndingathanda ukubona iBoeing 757 enomgangatho weVC ngamanye amaxesha kwixesha elizayo. Ndicinga ukuba i-757 ikhutshiwe FSX kakuhle kakhulu.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: Bubble @ Sheep
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #619 by Gh0stRider203
I-D115 ibhale: Ndingathanda ukubona i-Boeing 757 enomgangatho weVC ngamanye amaxesha kwixesha elizayo. Ndicinga ukuba i-757 ikhutshiwe FSX kakuhle kakhulu.
Ukuba uzimisele ukuchitha i $, i-Quality Wings 757 okwekat esezingeni
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #649 by julian1245
Kwezinye zeeplani zenza iinjini ziqhubeke ngenxa yokuba zibukeka zibi xa zingaphenduki
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #669 by Macca22au
Njengoko uninzi luhlaziywa kwi P3DI-4 njengoko kunokwenzeka, kunye nee-VC ngokuqinisekileyo.
Kodwa hlaziya kwi-v4 i-A320 kunye ne-B737-800 kungekudala umbhali enandipha ......
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #671 by jakedertree
Ndingathanda iVC engcono kwi-Airbus A400M. Kwakhona, ukuba umbhali unokukwazi ukunika imiyalelo ethile ukwenza ukuba ngaphantsi kwesandla esipheleleyo emhlabeni, oko kuya kuba yinto emangalisayo. Iyabaleka iHARD, kwaye andinako (kwaye awazi) ukufumana indlela yokukrazula iinjini ngexesha leeteksi.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #673 by Sergiozaki
le Boeing 777 pls ye P3D i-v3 / v4
Full ukusebenza panel VC plss ...
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #674 by Sergiozaki
I-A380 P3D i-v3 / v4
I-panau panel, i-VC yangempela ye-380
Iindidi ibhodi malunga Rikoooo - Wamkelekile Amalungu New - Ibhokisi enika - Ukwaziswa Flight Simulators Iiforam - FSX - FSX I-Steam Edition - FS2004 - Prepar3D - X-Plane Media - umfanekiso - Videos eropleni Talk - Fly Tunes - Yintoni yaye ubhabhe apho namhlanje - Ngenqwelomoya Real Okunye simulators moya - Flight Gear flight Simulator - - Malunga FlightGear - DCS ULUHLU - Benchmark Sims